…taorian’ny lanonana fanolorana mari-boninahitra ho ana –teratany Sinoa (Liu Chuan Qi) tompon’andraikitra iray mamita iraka tao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Isan’ireo nomeny toky fa hahazo izany ny federasiona malagasin’ny Savate Boxe Française sy ireo mbola nahazo ny tambiny noho ny ezaka nataony nampiakarana ny voninahitry ny firenena tamin’ireo fifaninanana iraisam-pirenena, ka efa nahazo ny fankatoavany. Na izany aza anefa dia azo heverina ho mbola baraingo ihany izany amin’izao ankatoky ny fanovana governemanta izao.
Nandritra ny valan-dresaka nataony tamin’ny mpanao gazety no nanambarany fa « efa nihoatra ny tetibola tokony hoampiasaina ny vola nivoaka tao amin’ity minisitera ity ». Isan’ireo nolazainy fa tena nibahana teo amin’ny fandaniana ny lalaon’ny Nosy sy ny lalao Afrikanina, ankoatra ireo fotodrafitrasa tsy maintsy novitaina toa an’Ambondrona (Mahajanga), ny famaranana ny famitana ireo kianja mitafon’Antsiranana sy Toliara. Noho ireo antony ireo no nambarany fa « tsy nahazoan’ireo federasiona sasantsasany fahafahampo tamin’ny fangatahana nataony ».